lyju – Myanmar Live
၃။ အွန်လိုင်းမသမာလောင်းကစားဝက်ဆိုဒ်ကိစ္စ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့ မြန်မာသံရုံညွှန်ကြား
December 14, 2019 January 20, 2020 - by lyju
၃။ အွန်လိုင်းမသမာလောင်းကစားဝက်ဆိုဒ်ကိစ္စ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့ မြန်မာသံရုံညွှန်ကြား ပလေယာများ မသမာအွန်လိုင်းလောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုဒ် လိမ်လည်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာလူမျိုးများ သားကောင်အဖြစ်မခံရဖို့အတွက် ဒီပြဿနာကို …
၂။ လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုဒ်ထဲကနေ ငွေပြန်ထုတ်လို့မရတဲ့ တိုင်တန်းချက်အများအပြားရှိပါတယ်
November 9, 2019 January 20, 2020 - by lyju
၂။ လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုဒ်ထဲကနေ ငွေပြန်ထုတ်လို့မရတဲ့ တိုင်တန်းချက်အများအပြားရှိပါတယ် အွန်လိုင်းလောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေက လောင်းကစားလုပ်ဖို့ ငွေလွှဲထည့်ခိုင်းပြီး နောက်ဆုံးမှာ ငွေ ပြန်ထုတ်ယူလို့မရတဲ့အတွက် …
October 5, 2019 January 20, 2020 - by lyju
ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာတွေကို လိမ်လည်တဲ့လောင်းကစားဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေပျံ့နှံ့နေ တဲ့သတင်းထွက်ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာလုပ်သားများ နားမယောင်မိအောင်သတိထားကြပါ။ တသက် လုံးစုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ မသမာဝက်ဆိုဒ်တွေဟာ လိမ်လည်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ …
တစ်ပတ်စာဗေဒင်ဟောကိန်း 17-23 ဒီဇင်ဘာလ 2018
December 17, 2018 December 17, 2018 - by lyju
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အလုပ်အကိုင် အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းခြင်းများသည် သင့်အား ကံကောင်း စွာနဲ့ ကျေနပ်အားရလောက်တဲ့အောင်မြင်မှုဆီ …
တစ်ပတ်စာဗေဒင်ဟောကိန်း ၁၀ – ၁၆ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈
December 10, 2018 December 10, 2018 - by lyju
တနင်္လာနေ့မွေးဖွားသူ အလုပ်အကိုင်/ပညာရေး : မပြီးပြတ်နိုင်သေးတဲ့အလုပ်များ ပြန်လည်ပြုပြုပြောင်းလဲရမယ့်အလုပ်တွေ ရှိနေပြီး အလွန်လည်းငြီးငွေ့လာနေပြီး ပျင်းရိလာနေပါပြီ ငွေရေးကြေးရေး : …
ကိစ္စမရှိပါ! Facebook တွင် ဓါတ်ပုံများကို Troll လုပ် လှောင်ပြောင်မှုအပေါ် Sai Sai ဖြေရှင်းချက်
September 21, 2018 September 21, 2018 - by lyju
အောင်မြင်နေတဲ့ ရက်ပ်အဆိုတော်နဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က သူ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ …
ကမ္ဘာ့သတင်း / သတင်းများ / အလုပ်သမားရေးရာသတင်း / မြန်မာ
သေဆုံးမှုထပ်မံတိုးလာ! မလေးရှားတွင် အရက်တုသောက်သုံးမိသဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမား 16 ဦးအထိသေဆုံးပြီ
September 20, 2018 April 16, 2019 - by lyju
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် မလေးရှားအာဏာပိုင်များက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံတွင် …
အိမ်ပြန်ရပြီ! လူကုန်ကူးခံရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား 8 ဦးအား ထိုင်းမှပြန်ပို့ပေး
September 19, 2018 September 19, 2018 - by lyju
မဲဆောက်မြို့နယ်ရှိ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ ပူးပေါင်းပြီး တာ့ခ်ခရိုင် မဲဆောက်မြို့နယ်အတွင်းတွင် လူကုန်ကူးခံထားရသူများအား ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ် မဲဆောက်မြို့ …
U Zaw Tika ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်က ပလာကျင်ဘူရီရဲစခန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဖမ်းဆီးခံရသည့် …
ထိုင်းနိုင်ငံရှိရေလုပ်ငန်းများသို့ MOU စနစ်ဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမားလေးသောင်းကျော် အေဂျင်စီများမှတဆင့် စေလွှတ်မည် ထိခိုက်လွယ်သည့်အလုပ်၌ပါဝင်၍ အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာအလုပ်သမားဝန်ကြီးမှာကြား
September 18, 2018 September 18, 2018 - by lyju
ထိုင်းနိုင်ငံရှိရေလုပ်ငန်းများသို့ MOU စနစ်ဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမားများ တရားဝင်စေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် …